ပြင်သစ်မှ cutlets de-volay ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ငှက်တစ်ကောင်မှ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာသာပြန်သည်၊ သို့သော်ထိုတွင်မည်သူသိသနည်း။ )) ဤအားလပ်ရက်စာရွက်သည်အားလပ်ရက်စားပွဲတိုင်းကိုအလှဆင်လိမ့်မည်။ အရသာရှိတဲ့ကြက်သားပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ meatballs ...
တစ်သစ်တော်သီးသစ်ပင်မှာဘာဗီတာမင်ရှိပါသလဲ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအဖြစ်သစ်တော်သီးရှေးခေတ်ကကတည်းကလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ bioactive ပစ္စည်းများထဲတွင်ကြွယ်ဝနေသည်။ သစ်တော်သီးအသီးအပွသကြား (ဂလူးကို့စ, fructose, sucrose), ဗီတာမင် A, ဆံ့ ...
ဒီနေရာတွင်ကဏန်းတုတ်နှင့် Pickled ၏ prompt သုပ်စာရွက်: ကဏန်း။ coli ဆား။ သခွားသီး, var ။ ဥ, စည်သွတ်ကုန်ပစ္စည်းများ။ ပြောင်းဖူး, Mayonnaise, ဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ ဒိန်ခဲအရသာနှင့်အတူ crackers ။ အားလုံး, Cube သို့ Ext ခုတ်ဖြတ်။ အစိမ်းရောင် ... ။
mash အာလူးအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? အာလူးပြုတ်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ် ခဲ့. , စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ အဆိုပါ Plum ထည့်ပါ။ ရေနံ။ နို့ကိုပြုတ်နှင့်အာလူးမှ add, ပြီးတော့သူက tolkushkoy သတိရပါ။ သင်တဦးတည်းလတ်ဆတ်တဲ့ကြက်ဥထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ mashed လျှင် ...
ကော်ဖီကြိတ်သို့မဟုတ်ကြိတ်? သူတို့ကငါ့အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်။ ဤသည် 1 conjugation ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကဒphilနပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းကိုပြောတာပါ။ )) ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ငါက grind” မြေဖြူတွေသုံးပြီး 1 cl grind လို့ပြောဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်။ ငါကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်သည်။
ကပ္ပတိန်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အမဲသားကဘယ်လိုလဲ ??? ပြီးတော့ငါအရင်စာရေးသူနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားစွာချက်ပြုတ်ခဲ့သည် - အမဲသားကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီး၊ နက်ရှိုင်းတဲ့ဒယ်အိုးထဲမှာတင်၊ ဆားငန်၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ပြီးတော့ထိပ်မှာ - ကြက်သွန်တစ်ဝက်၊
ဘယ်လို pies များအတွက်ဂေါ်ဖီထုပ် stuffing လုပ် prompt စာရွက်။ ငါများသောအားဖြင့်အဲဒီလို: 1 ။ luk2 ကြော်။ , ကြက်သွန်နီနဲ့မုန်လာဥနီထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်အသေကောင်သည်ဂေါ်ဖီထုပ်ပေါ် မူတည်. 20 မိနစ် ...
ပီနိုနိုဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုစားတာလဲ။ Pepino (Pepino) - နှစ်ရှည်ခံ။ အလွန်မြင့်မားသောချုံပုတ်အပင် (Latin Solanum muricatum Ait ။ ) သည်တောင်အမေရိကသို့စားသုံးနိုင်သောအသီးများနှင့်အတူတောင်အမေရိကရှိဇာတိဖြစ်သည်။ အရောင်ကြောင့် ...
ဇီနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်ဘာလဲ? ဇီအပေါ် pozhozha ။ ။ ဒါပေမယ့်ပြင်ပမှ။ ။ နှင့်ဆိမျ့တစ်အရသာပေးသည်!))) ကျွန်ုပ်တို့၏ဇီအမျိုးအစားအညီအမျိုးအစားပေါ်ဇီ, ဇီယာစေ့ကိုအစေ့သည် ...
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသိမ်းထားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ငါတစ်လိမ္မာပါးနပ်အသီးရောင်းချသူဖြစ်ဖို့အသုံးပြုရေခဲသေတ္တာထဲမှာငှက်ပျောသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့မအကြံပေးနှင့်ထိပ်တန်းဝယ်ချက်ချင်းလူအပေါင်းတို့သည်အသီးကိုစား s ...
အဘယ်သူမျှမ nerazmorazhivaya စားနေတဲ့အေးခဲပင်လယ်စာကော့တေးနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများရှိပါတယ်! ! ငါရွှေဝါရောင်ငံပြာရည်စာရွက်ထဲမှာ mussels ရှိပါတယ် Blog သို့လျင်မြန်စွာနဲ့အရသာရှိတဲ့, တူညီတဲ့ bungled နှင့်နိုင်ပါတယ် ...
အနက်ရောင်ပြားငွေဇွန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ပင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည်သို့မဟုတ်အခြားဆာလဖာဒြပ်ပေါင်းများ, ငွေမဲတက်လာပြီး, ဖုံးလွှမ်း၏အသေးစားပမာဏနှင့်အဆက်အသွယ်ငွေတွင်ငွေဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို ...
စွပ်ပြုတ်အသီးချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို? ငါ့ဇနီးကခံစားသောသက်သေပြချက်စာရွက်, ပါပဲ။ ကလေးများနံ့သာမျိုးကိုအဘယ်သူမျှမနိုင်။ နှင့်လူကြီးများပိုဆိုးရစပျစ်ရည်ကိုပေးရမယ်ဘူး! http://mangomania.ru/kompot_iz_suhofruktov ငါအခြောက်လှန်းအသီးကနေရေလောင်း ...
မည်သူမဆိုအိမ်တွင်ပြောင်းဖူးကိတ်မုန့်များကိုတစ်ကိုယ်တည်းလုပ်သူ၊ ဂျော်ဂျီယာ“ mchadi” ဟုခေါ်သည်။
မည်သူမဆိုအိမ်တွင်ပြောင်းဖူးကိတ်မုန့်များကိုတစ်ကိုယ်တည်းလုပ်သူ၊ ဂျော်ဂျီယာ“ mchadi” ဟုခေါ်သည်။ ငါစာအုပ် - အယ်လီနာ Kiladze "Purmaril အရသိရသည်ချက်ပြုတ်။ ဂျော်ဂျီယာဟင်းလျာများဟင်းချက်နည်းများ”, ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောမျက်နှာပေါ်၌မုန့်စိမ်းများကိုခူးစေသည်။
ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးရိုးရှင်းသောအေးစက်နေတဲ့ပြည်ကြီးငါးအကွင်းအဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ? ပြည်ကြီးငါးနှင့် LUKATushku ကနေကွင်းအတွက်မုန့်ညက်နဲ့ကြော်အတွက်လှိမ့်ချလိုက်, ရေနှင့်အတူရိုက်နှက်ကွင်း, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ကြက်ဥထဲမှာသို့ကျဆင်းလာသို့ဖြတ်ပြည်ကြီးငါး ...
စွပ်ပြုတ်အသီးအရွက်များအတွက်အရသာစာရွက်အကြံပေး! အသေးစိတ်! wse owoschi kotorie est pomit့kasanok w sakinut poresat- kubikami ။ MMM wkusnjatina ဈ dumat ne nado dolgo ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် TUShNYENashinkovanny ကြက်သွန်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ကြော် ...
multivarka တစ်ပန်းကန်တက်နွေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? function အပူ BLYuDMultivarku REDMOND RMC-M4524 အအေးအစာအာဟာရအပူဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 1: ဒီလိုလုပ်ဖို့။ , ထိုပန်းကန်ထဲမှာအစားအစာထားအိုးအိမ် Multivarki ထဲသို့ထည့်ပါ။ ပန်းကန်လုံးသေချာပါစေ ...
mescal Tequila ၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ? Tequila သောက် Tequila Related ကကျော်ပါတယ်။ Jalisco ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အမည်, က 19 ရာစုအကုန်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ နည်းပညာပိုင်း, ရှိသမျှ Tequila ရှိပါတယ် ...
ဘယ်လိုအရသာငါးကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်ဖို့ကျွန်မကိုပြောပြပါ? ရုံ, ဘောဇဉ် grinder မှတဆင့်ငါးဇာတိပကတိ skip ကြက်သွန်ကို ထား. နှင့်လည်းအသား grinder, ကြက်သွန်ဖြူ, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ကြက်ဥစုံတွဲတစ်တွဲ, အဖြူရောင်မုန့်အစအနမှတဆင့်။ နေရောင်ကောင်းစွာ stuffing သော့ပွငျ ...
သူတို့အသုံးဝင်သောလျှင်အဆိုပါနာနတ်သီး, အသုံးဝင်သောရှိပါသလဲ အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနာနတ်သီးနာနတ်သီးအားလုံးနီးပါးဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်ပါရှိသည်။ ပန်ကရိယအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ပျောက်ဆုံးကိုအထောက်အကူပြုရန်, အူများ၏လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော် ...